iPhone6| အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone ကို 6ငါတို့လိုချင်တာတွေ၊ ပိုကြီးပြီးပိုအစွမ်းထက်တယ်။ အပါးလွှာဆုံး ၀.၆၉ စင်တီမီတာဖြင့်ဖန်တီးသည် အာဏာအရှိဆုံး. ၄.၇ လက်မ Retina HD display Resolution မှာ 1334 × 750 pixels ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်အစ်ကိုကြီး iPhone6Plus ပါ ၀ င်လာသည်။ တူညီသောအင်္ဂါရပ်များရှိပြီး ၄.၇ အစား ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်။
Un အသစ်ကပိုပြီး rounded ဒီဇိုင်း, အနားစွန်းမှာအနည်းငယ်ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူယခင်ကတူသောအင်တင်နာကိုနေရာချဖို့နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုနှင့်အားလုံးဗားရှင်းသုံးအောင်မြင်မှု, အရောင်သုံးခု, အာကာသမီးခိုးရောင်, ငွေနှင့်ရွှေ။
၎င်း၏ 64-bit ဗိသုကာအတွင်းတစ် ဦး အသစ် A8 Processor ကို M8 လှုပ်ရှားမှု coprocessor ဖြင့်လိုက်ပါသွား။ ပထမ ဦး ဆုံး iPhone ထက်အဆ ၅၀ ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အရာအားလုံး။
သူ၏ကင်မရာသည်ဓာတ်ပုံများတွင်များစွာတိုးတက်မှုမရှိခြင်း၊ 8MP ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် Focus Pixel အာရုံခံကိရိယာကိုတိုးတက်စေသည်။ ဟုတ်တယ် သူကမှတ်စုပေးသည်ရှိရာဗီဒီယိုထဲမှာ 1080p ဗီဒီယိုများနှင့် 240fps အထိနှေးကွေးစွာရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းတို့နှင့်အတူ။
အားလုံး ပိုမြန်အရာအားလုံးပိုကောင်းတယ် ဆက်သွယ်မှု၊ WiFi မြန်နှုန်း၊ ဒေတာ၊ Touch ID၊ မိုဘိုင်းငွေပေးချေခြင်း၊ NFC ကိုbarometric sensor အသစ်တစ်ခုနှင့်အားလုံး iOS 8 ဖြင့်လိုက်ပါယနေ့ခေတ်အထိအဆင့်မြင့်မိုဘိုင်း operating system
iPhone6မှာပါလာမှာပါ သုံးစွမ်းရည် options များ, 16GB အတွက် ၆၉၉ ယူနစ်၊ ၇၄၉ ယူရို ၆၄ GB နဲ့ ၈၉၉ ယူရို 699GB ကိုရမယ်။
iPhone6မှနောက်ဆုံးရသတင်းများ
၄.၇ လက်မအရွယ် iPhone6နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
ယူရို ၂၀၀ ထက်မနည်းသောပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော 128GB iPhone ကိုရယူပါ
အိုင်ဖုန်းအသစ်တွေဒီမှာရှိနေတယ်၊ ​​သူတို့ကယူရို ၁၀၀၀ ကျော်တဲ့စျေးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။
6GB iPhone 32 အသစ်ကိုအာရှတွင်ပြန်လည်ရောင်းချ
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
iOS 10.3 Beta 1 နှင့် iOS 10.2.1 မြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာငါတို့အဆုံးသတ်တော့မယ့်အကြောင်း, Cupertino မှယောက်ျားများသည်ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
ကောလဟာလ: iPhone 6s ဘက်ထရီအစားထိုးအစီအစဉ် iPhone6သို့လာ
por ပါပလော Aparicio လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
UPDATE: Apple Insider က Apple ကိုဆက်သွယ်သည်ဟုပြောဆိုပြီး Cupertino မှသူများသည်ဤကောလာဟလကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည် TO …
iPhone6မျက်နှာပြင်ပြoverနာနှင့် ပတ်သက်၍ လူတန်းစားအရေးယူမှုအငြင်းပွားမှုသည်အရှိန်ရလာသည်
iPhone6ရောင်းချပြီးမကြာမီတွင်၎င်းသည်အချို့သောလွယ်ကူမှုနှင့်ကွေးညွှတ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၄ လက်မအရွယ် iPhone အသစ်တစ်ခု၏ဗီဒီယိုတစ်ခုပေါ်လာသည်။ iPhone 4c: မင်းလား?
၄ လက်မအရွယ် iPhone အကြောင်းပြောသောကောလဟာလများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိခဲ့သည်။
iPhone 6c တွင် 5c ထက်ဘက်ထရီနှင့် RAM ပိုမိုများပြားသည်။ [RUMOR]
ကောလာဟလနေ့။ ခဏလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် iPhone ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ကောလဟလတစ်ခုအကြောင်းပြောနေတာပါ။
iPhone6Smart Battery Case ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း
ကြိုတင်ကောလာဟလများမရှိဘဲနှင့် Apple သည်ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့ကစတင်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
ကောလာဟလအသစ်များအရ iPhone 6c ကိုနွေ ဦး ရာသီရောက်မည်ဟုဆိုသည်
အတော်များများနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော iPhone 6c အကြောင်းပြောသောကောလာဟလများဖြစ်ကြသည်, သို့သော်ဤကောလာဟလများတွင်တစ် ဦး တည်းအချက်သာရှိသည် ...